Soo dejisan WPS Office 10.1.0.5579 – Windows – Vessoft
Xafiiska WPS – set ah software xafiiska in waraaqaha shaqeeyaan. Dhismaha ee software-ka waxaa ka mid ah hab si ay u abuuraan bandhigyo, iyadoo editor isbiriidhshiit iyo qoraalka shaqeeyaan. Xafiiska WPS taageertaa qaabab file caan ah oo ay ku jiraan qaabab Xafiiska Microsoft ah. software waxa uu leeyahay tiro ka mid ah qalabka si ay ula PDF-files, xubno graphic, qaaciidooyinka, naqshadaha, images, iwm Office WPS sidoo kale kuu ogolaanayaa inaad si ay u ilaaliyaan waraaqaha la password a iyo soo diri files by email shaqeeyaan. software waxay leedahay interface ku haboon oo dareen leh.
fursadaha Wide of editor qoraalka
Waxay abuurtaa iyo tifatirada barasantigareeyaan ah
Shaqo la bandhig
Taageerada ee qaabab file caan
English, Français, Deutsch, Italiano... CrystalDiskInfo 7.0.4